Laanta Socdaalka oo soo bandhigtay aragtideeda Soomaaliya | Somaliska
Laanta Socdaalka ayaa soo bandhigtay aragtideeda ku aadan xaalada amaanka ee gobolada kala duwan ee Soomaaliya, aragtidaan ayaa loo isticmaalaa in lagu go'aamiyo codsiyada dadka magan galyo doonka ah. Warbixintaan ayaa soo bandhigtay in ay xaalado dagaal ka jirto gobolo badan oo Soomaliya ka mid ah, ayadoo warbixinta lagu sheegay in xaalada amaanka ee magaalada Muqdisho aysan is bedelin. Warbixinta ayaa xustay dagaalo beeloodyo ka jira gobolada dhexe. Warbixinta ayaa sidoo kale taabatay midowgii labada urur ee Xisbul Islaam iyo Xaraka Al-shabaab ayadoo sheegtay in ay tahay isbedel wayn oo ku yimid xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya balse warbixinta ayaa lagu yiri in midowgaas uusan wax wayn ka badalayn xaalada amaanka ee Soomaaliya. Ugu dambeyntii warbixinta ayaa sheegtay in abaaro aad u xun ay ku dhufteen Soomaaliya ku waasoo wiiqay xaalada bani'aadanimo ee Soomaaliya.
Laanta Socdaalka ayaa soo bandhigtay aragtideeda ku aadan xaalada amaanka ee gobolada kala duwan ee Soomaaliya, aragtidaan ayaa loo isticmaalaa in lagu go’aamiyo codsiyada dadka magan galyo doonka ah.
Warbixintaan ayaa soo bandhigtay in ay xaalado dagaal ka jirto gobolo badan oo Soomaliya ka mid ah, ayadoo warbixinta lagu sheegay in xaalada amaanka ee magaalada Muqdisho aysan is bedelin. Warbixinta ayaa xustay dagaalo beeloodyo ka jira gobolada dhexe.
Warbixinta ayaa sidoo kale taabatay midowgii labada urur ee Xisbul Islaam iyo Xaraka Al-shabaab ayadoo sheegtay in ay tahay isbedel wayn oo ku yimid xaalada siyaasadeed ee Soomaaliya balse warbixinta ayaa lagu yiri in midowgaas uusan wax wayn ka badalayn xaalada amaanka ee Soomaaliya.
Ugu dambeyntii warbixinta ayaa sheegtay in abaaro aad u xun ay ku dhufteen Soomaaliya ku waasoo wiiqay xaalada bani’aadanimo ee Soomaaliya.
Livet är hårt i Somalia eftersom det kommer att göra en massa saker och bedjande det finns hungersnöd, krig, våld, tribalism, divisioner men det kommer inte glömma vårt land
meddelande till alla somaliska
asc soo ban dhigida laanta socdaalka xaalada amaanka gobolada somaliyeed:
maxay ka badali kartaa dadka ka yimiday gobolada somaliya- sida middle shable amd lower shbeele oo swidan ku haysta diidmada?
ma laga yaabaa in uu u hir galo sida go`aan kii muqdisho oo kale?